Manampy anao amin'ny fitantanana ny volanao manokana Fintonic | Vaovao IPhone
Ny fangatahana hifehezana ny fandaniana ao an-trano dia lamaody. Ao amin'ny App Store dia misy fampiharana tsy tambo isaina misy, ny sasany izay mahazo isa ambony dia avo amin'ny fanamarihana bilaogy manokana. Na eo aza izany rehetra izany, tsy mbola hitako ny fampiasana an'io karazana fampiharana io izay tokony ampidirinao amin'ny tanana amin'ny tanana ny fandanianao, angamba satria tsy hitako hoe mahavita azy aho. Tamin'ny andro hafa anefa dia nifanena tamiko aho Fintonic, fampiharana izay manangona ny karamanao sy ny fandanianao rehetra mandeha ho azy, ary namporisihina aho hanandrana azy.
Izany rehetra izany dia vokatry ny fangatahan'ny mpihaino ny podcast anay, izay nangataka anay hamakafaka ilay fampiharana ary, indrindra, hanome ny hevitray momba ny iray amin'ireo mampiavaka azy fototra: fidirana amin'ny kaontinao any amin'ny banky ary angony ny angonao rehetra. Raha ny marina, amin'ny Fintonic dia tsy mila miahiahy momba ny fidiranao amin'ny vola miditra na fandanianao ianao, satria miditra amin'ny kaontinao izany ary mahasoa anao. Vantany vao naharesy ny tsy fahatokisana voalohany ary rehefa avy namaky betsaka momba ilay lohahevitra aho dia nanapa-kevitra ny hanandrana izany, ary amin'ny ankapobeny dia mila milaza aho fa avo ny fahafaham-poko.
1 Fiarovana mialoha ny zava-drehetra
2 Ny fampahalalana rehetra eny an-tananao
4 Ny tombam-bidinay
Fiarovana mialoha ny zava-drehetra
Mazava ho azy fa ny zavatra voalohany eritreretinao dia ny tsy hanomezanao ny teny miafina any amin'ny kaontinao any amin'ny kaontinao. Voalohany indrindra, nitady fampahalalana azo alaina ao amin'ny tranonkalan'ny fampiharana aho sy tamin'ny pejy hafa izay namakafaka azy. Amin'ny fotoana rehetra dia azo antoka fa ny fiarovana dia avo indrindra ary izay tsy afaka miditra amin'ny angon-drakitrao fotsiny izy ireo, raha tsy mahazo fidirana amin'ny fandidiana hafa. Raha ny marina, rehefa te hanao fandidiana isika dia tsy maintsy mampiditra sonia foana na mampiasa kara-kaody ary manamafy amin'ny alàlan'ny SMS, noho izany dia tsy tokony ho olana izany. Saingy mazava ho azy fa tsy maintsy manome vato fahatokisan-tena ho an'ny fampiharana ianao, ary izany dia hiankina amin'ny tsirairay.
Ny fampahalalana rehetra eny an-tananao
Ny olana momba ny fiarovana ankoatry ny fampiharana dia tena tsara. Ny fampahalalana atolony anao dia miavaka. Zatra amin'ny fampiharana ofisialy (ratsy) ofisialy amin'ny banky, ny fahitana ny fampahalalana rehetra voasokajy ho karazana fandaniam-bola, miaraka amin'ny statistika, fandaniana antonony ary ny vinavina dia tena manaitra ary tsapanao ny fandanianao ny volanao, ny dingana voalohany azoko atao mitahiry zavatra. Ny rafitra fampandrenesana, na finday na mailaka, dia mampandre anao rehefa misy hetsika. Fa ny tena nahagaga ahy dia ny rafi-pikarohany. Izay rehetra tsy maintsy nitady toerana dia hahita fa tsy dia tsara ny famoronana ireo pejin-tranonkala any amin'ny banky, ary indrindra ny rindranasa finday.
Ny fangatahana dia feno sosokevitra momba ny fomba ahafahanao mitahiry vola: raha manana kaomisiona amin'ny banky betsaka ianao dia manome torohevitra anao momba ny fomba hitsitsiana, na raha nandoa be ianao tamin'ny zavatra iray dia manome soso-kevitra hafa. Heveriko fa ireo tatitra ireo dia ny Fintonic no hiorenan'ny orinasany, satria etsy ankilany maimaimpoana tanteraka ny fampiharana, tsy misy fividianana fampiharana ary tsy misy doka.
Raha tsy manahirana anao ny famelana ny antsipirian'ny bankinao, dia Fintonic no fangatahanao. Ny fampahalalana atolotra azy dia mety tsy ho feno kokoa na aseho tsara kokoa., ary tena fanampiana be dia be izy io tsy amin'ny fifehezana ny fandaniana fotsiny nefa tsy mandinika akory ny fomba fitehirizana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Manampy anao amin'ny fitantanana ny volanao manokana ny Fintonic
Aleoko ny mitazona ny kaontiko amin'ny MoneyWiz fa tsy vita daholo, miaraka amin'ny fampifanarahana ao anaty rahona ny fitaovana rehetra manomboka amin'ny mac ka hatramin'ny iphone sy ipad, mahagaga.
Toa mahavariana ahy ny Fintonic. Efa zato taona aho no nampiasa ilay rindranasa (na dia tranonkala fotsiny aza io), ary io no feno indrindra eny an-tsena tsy misy isalasalana. Tena mila azy ireo aho hanome ahy ny zava-drehetra vita, manana kaonty maromaro misokatra aho ary miaraka amin'ireo fanamarihana Fintonic dia efa nisoroka fihoaram-pefy maromaro aho (milaza aminao izany rehefa ampitaina aminao ny fiantohana, ohatra, ary raha tsy manam-bola ao amin'ilay kaonty ianao , miditra ianao ary misoroka ny fijanonana amin'ny mena), tapakila dika mitovy amin'ny fanairana ao an-trano ary, rehefa hitako hoe ohatrinona no andoavako ny kaomisiona isan-taona dia nandeha tany amin'ny banky tamin'ny app aho ary afaka naka ny fikolokoloana karatra roa …. Androany dia fintonic ihany no atao; ary namana afaka.
Ireo no emoji animated 153 an'ny Apple Watch
Workflow: inona izany, ny fomba fiasa ary inona no azoko atao miaraka aminy